Baolina kitra - Barea :: Mbola baraingo ny ho tohin’ny fiaraha-miasa amin’i Nicolas Dupuis • AoRaha
Baolina kitra – Barea Mbola baraingo ny ho tohin’ny fiaraha-miasa amin’i Nicolas Dupuis
Mandroso ny fotoana. Hiditra amin’ny herinandro fahatelo amin’ny fe-potoam-piasany ireo mpikambana vaovao ao amin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Mbola tsy misy fanapahan-kevitra nivoaka, hatreto, mikasika ny hanohizana na tsia ny fiaraha-miasa amin’ny mpanazatra nasionaly, Nicolas Dupuis.
Hanomboka amin’ny volana novambra ho avy izao anefa ny dingana fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, hatao amin’ny taona 2021. « Mbola ho hita miandalana eo ny fanohizana ny fiaraha-miasa amin’i Nicolas Dupuis », hoy fotsiny i Arizaka Rabekoto Raoul, filohan’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra, omaly.
Mbola tsy fantatra ihany koa ny fandaharam-potoana amin’ny fanomanan’ny ekipam-pirenena ny Barea izany CAN 2021 izany. Mifantoka any amin’ny fikarakarana ny lalao mandroso hatrehan’i Madagasikara amin’i Namibia ao anatin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny CHAN 2020, amin’ny alahady ho avy izao, etsy Mahamasina ny FMF.
“Laharam-pahamehana ho an’ny FMF, amin’izao fotoana izao, ny fanomanana ny lalaon’ny Barea amin’ireo mpilalao avy any Namibia. Nivoriana manokana androany (ndlr: omaly) ny fepetra manokana horaisin’ny Federasiona amin’ny fandaminana sy fiarovana ny fandriampahalemana amin’io fihaonana iraisam-pirenena io”, hoy indray Razafimamonjy Fenosoa, tompon’andraikitry ny serasera ao amin’ny FMF.
Mikasika an’ity fifandonana amin’ny faran’ny herinandro ity, dia hivoaka anio ny lisitra ahitana ireo mpilalao hiatrika ny lalaon’ny Barea sy Namibia. “Mbola tsy feno ny mpilalao rehetra. Vao tonga anio (Ndlr: omaly) ireo mpilalao sasany nandrafitra ny ekipan’ny Cnaps tany amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaonfederasiona afrikanina (Caf). Rahampitso (ndlr: anio) vao hamoaka ny lisitra farany izahay”, araka ny fanazavan’Andriamananrivo Franklin, mpanazatra nasionaly.
Fotodrafitrasam-pifamoivoizana eto an-drenivohitra :: Amin’ny volana avrily 2020 vao ho vita ireo asa fanamboaran-dalana rehetra